သြစတြီးယား, အနောက်ဘက်တွင်ဂျာမနီနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံမြောက်ဘက်ရှိလီချင်စတိန်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဗဟိုဥရောပကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်တောင်ဘက်တွင်အီတလီနှင့်ဆလိုဗေးနီးနှင့်ဆလိုဗက်ကီးနှင့်အရှေ့ဘက်တွင်ဆာငတ်မွတ်သိပ်။ သြစတြီးယား 1995 ကတည်းကဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံရေးအရ, သြစတြီးယားတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်နှစ်ခုအိမ်သူအိမ်သားပါလီမန်တစ်ဦးအဓိပတိနှင့်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူတစ်ဦး "ပါလီမန်ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။
•အနိမျ့အခွန်: ကနဦး 2.5% အလှူငွေအခွန်ပြီးနောက်ရှိသမျှသည်အခြားသောအခွန်အခများများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့် Non-နေထိုင်သူများအဘို့မတည်ရှိ။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်အခြားသူများကိုသူတို့အစိုးရတွေကအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
•အီးယူအဖွဲ့ဝင်: သြစတြီးယား 1995 သည်အခြားအီးယူကုမ္ပဏီများနှင့် passive ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကတည်းကဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ရိုးအမြစ်ကိုသြစတြီးယားအတွက်ရှိပြီးသားဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့နာမတော်လည်းအလားတူနာမည်တစ်ခုမသုံးရပါမည်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများကနေခွဲခြားဖို့စကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။
သဘာဝသို့မဟုတ်တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များတည်ထောင်တစ် notarized ကြေညာစာတမ်းကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ် သာ. ကြီးမြတ် privacy ကိုများအတွက်တရားဝင်တည်ထောင်သူအဖြစ်ပုံပေါ်သောသူအခွင့်ရ proxy ကိုသုံးပြီးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအများပြည်သူဖောင်ဒေးရှင်းမှ Registry ကိုမှာပေါ်လာဖို့ရှိခြင်းမဟုတ်ခြင်းအားဖြင့်အမှန်တကယ်တည်ထောင်သူအချိန်ကယ်တင်တော်မူ၏။
တည်ထောင်သူအခြေခံအုတ်မြစ်၏ရည်ရွယ်ချက်မဆိုအမျိုးအစားကြေညာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လုံခြုံနှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့ရင်းနှီးမြှပ်နှံနေကြတယ်နှင့်၎င်းတို့၏အမြတ်အစွန်းဖြန့်ဝေမည်အကြောင်း, ဘယ်လို, အခြေခံအုတ်မြစ်စီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပါဝင်နိုင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်ပြီးစီးပေါ်၌အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်မည်သို့ကျန်ရှိနေသေးသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်၏ရပ်စဲဘို့လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်နိုင်ပါသည်။
မူလကြေငြာတည်ထောင်သူကပြင်ဆင်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဖော်ပြထားလျှင်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ကြေငြာပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ပြင်ဆင်ချက်ကိုတည်ထောင်သူတစ်ဦး notarized လက်မှတ်လိုအပ်သည်။ တည်ထောင်သူလည်း၎င်းတို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်များပြန်ရုပ်သိမ်းခွင့်ကြိုတင်ယူထားအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦး proxy ကိုတည်ထောင်သူသုံးတဲ့အခါသူတို့အများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းဘယ်တော့မှနေကြသည်အဖြစ်တည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများများ၏အမည်များပုဂ္ဂလိကရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုကုန်သွယ်မှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမဟုတ်သလိုကုမ္ပဏီအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူး။ ထို့အပြင်သူတို့တစ်တွေမှတ်ပုံတင် ပူးပေါင်း. အပြည့်အဝတာဝန်ယူမှုနှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖြစ်လို့မရပါဘူး။
"အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ" အဖြစ်လူသိများအခြေခံအုတ်မြစ်ကနေအကြိုးခံစားရသူပုဂ္ဂိုလ်များကိုမဆိုတိုင်းပြည်နိုင်ငံသားများဖြစ်နှင့်သြစတြီးယား၏အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူတစ်ဦးအကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူခန့်အပ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများများ၏အမည်များတည်ထောင်၏ကြေညာစာတမ်းထဲမှာမပါဝင်ပါ။ သူတို့ကတစ်ဦးပုဂ္ဂလိကစာရွက်စာတမ်းဖြစ်နေဆဲနှင့်ဖောင်ဒေးရှင်း Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းမဟုတ်သော addendum တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့ပင်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း, စီမံခန့်ခွဲကိုယ်စားပြုများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဒါရိုက်တာတစ်ဘုတ်အဖွဲ့ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တည်ထောင်၏ကြေညာစာတမ်းကထွက်သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားဖွငျ့လိုက်နာရမည်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်ဆွဲသွင်းပါဝင်နှင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ၏ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဆောင်းပါးများနှင့်ဆင်တူသည်။ ၏ဘုတ်အဖွဲ့
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အားလုံးအရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ပင်ရဦးမည်ဖြစ်သောအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ကကြီးကြပ်သည်။ အဆိုပါကြေငြာဘုတ်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များကလိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်ပေါ့ဆမှုတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ကခွင့်ပြုချက်လိုအပ်အရောင်းအအမျိုးအစားများစာရင်းတစ်ခုပေးနိုင်ပါသည်။
တည်ထောင်သူများကပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်မှပံ့ပိုးမှုများ 2.5% တစ်မှုနှုန်းမှာအခွန်ကောက်နေကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကဒီသေးငယ်တဲ့ "ဆုကျေးဇူး" အခွန်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားပါ။
ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုလည်း 12.5% တစ်မှုနှုန်းမှာကော်ပိုရိတ်အခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ကင်းလွတ်ခွင့်ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည် (သြစတြီးယားသို့မဟုတ် Non-သြစတြီးယား) နှင့်စုဝင်ငွေကနေမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အဖြစ်ဝင်ငွေအချို့အမျိုးအစားများများအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
withholding အခွန်လည်း 12.5% နှုန်းကိုမှာအကျိုးခံစားခွင့်မှဖြန့်ဝေလျှောက်ထားသည်။ သို့သျောလညျးအပြည့်အဝကင်းလွတ်ခွင့် Non-နေထိုင်သူအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းသူတို့ရဲ့ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏ကမ္ဘာကြီးဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်လူတိုင်းလည်းသူတို့ရဲ့အခွန်အေဂျင်စီများအားလုံးဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီအများပြည်သူဖောင်ဒေးရှင်းမှ Registry မှာထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ proxy ကိုတည်ထောင်သူသုံးခြင်းအားဖြင့်အမှန်တကယ်တည်ထောင်သူရဲ့နာမညျကိုပုဂ္ဂလိကနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအမည်များကိုတစ်ဦး addendum တွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တည်ထောင်၏ကြေညာစာတမ်းအတွက်ဖောင်ဒေးရှင်း Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းမဟုတ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကသူတို့နာမည်ပုဂ္ဂလိကရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခုကသြစတြီးယားပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပါတယျ: အပြည့်အဝနိုင်ငံခြားပါဝင်မှု, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အနိမ့်အခွန်များမြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်အီးယူအဖွဲ့ဝင်။